Somali News 03.19.2021
By Halima Osman • Mar 19, 2021
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay soo warineysaa lix dhimasho oo kale oo la xiriirta COVID-19 iyo ku dhowaad 600 xaaladood oo cusub, iyadoo ku dhowaad 10% ay ka yimaadeen Gobolka Woodbury. Wali ma jiraan wax dillaac ah oo ka jira xarumaha daryeelka muddada-dheer ee gobolka.
Dashboardka tallaalka on-line-ka ah ayaa muujinaya in ka badan 447,000 oo qof oo ku nool Iowa ay si buuxda uga tallaalan yihiin COVID-19.
Siouxland waxay ku jirtaa Digniinta Qabowga Dabaysha illaa subaxa Talaadada markay tahay 9-ka subaxn
By Halima Osman • Feb 15, 2021
Siouxland waxay ku jirtaa Digniinta Qabowga Dabaysha illaa subaxa Talaadada markay tahay 9-ka subaxnimo Adeegga Cimilada Qaranka ayaa sheegaya in la filaayo qabow daran oo qabow oo gaaraya ilaa 40 ka hooseeya habeenkii.
Cimiladii xalay waxay diiwaan gelisay gobolka oo dhan, oo ay ku jirto Sioux City oo leh -28.